Apple inotangisa iOS 11.2.5 beta 5 yevagadziri | IPhone nhau
Apple inoburitsa iOS 11.2.5 beta 5 yevagadziri
Uye isu tinoenderera mberi neshanduro dze beta dzakatangwa neApple kuvandudza mashandiro eIOS 11, mune iyi kesi tine vhezheni yacho iOS 5 beta 11.2.5 yevagadziri patafura. Mazuva maviri chete apfuura beta yechina yeiyi vhezheni yakatangwa uye isina nguva yekufema, isu tatova neyechishanu, mukuwedzera, imwe yakavhurwa zviri pamutemo yekupedzisira vhezheni ine chengetedzo chigamba cheSpecter.
Zvinotaridza senge kumhanyisa kwemotokari yemumhanyi inokwira magiya kwete kuzvimisikidza ivo pachavo kugadzirisa matambudziko eiyo iOS sisitimu inoshanda. Chero zvazvingaitika, iyo nhau mune iyi vhezheni yevagadziri iyo Inowanikwawo kune avo vakanyoreswa muchirongwa cheveruzhinji beta, inowedzera akasiyana Siri zvinowedzera uye zvakajairika bug fixes.
Zvese zvinoratidza kuti nhau nekuvandudzwa kunoitwa muSiri mubatsiri, yaizove yakabatana zvakananga nekuvandudza mashandiro kana HomePod yatanga, mutauri akangwara kubva kuvakomana vanobva kuCupertino, uyo anoshandisa mubatsiri kupindura mibvunzo yedu uye kutibatsira mune mamwe mamiriro.
Chero zvazvingaitika, zvese zvinoratidza kuti Siri anoda zvakawanda kuti awane vamwe vese vabatsiri vane makwikwi, chinhu chakanaka sezvandinogara ndichitaura, mutauro wechiCastilian uyo vamwe vese vasina. Asi nekuda kweizvi, Apple inoda kuivhura zviri pamutemo, saka ticha tarisa pane zvishandiso zvatinazvo uye tiri kuzosiira zvimwe zvacho kana zvasvika.
Mune ino kesi, iyo beta vhezheni inogona zvakare kutorwa pasi kubva ku yeruzhinji beta chirongwa uye nekuda kweizvi, zvese zvaunofanirwa kuita kushandisa yako Apple ID kana usina kunyoreswa kare kana kugadzirisa zvakananga kubva kuZvirongwa kuburikidza neOTA.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inoburitsa iOS 11.2.5 beta 5 yevagadziri
nhasi mambakwedza vaburitsa ios 11.2.2
Pindura ku atv
Haasi ese marjaja asina waya akashata uye iOttie's muenzaniso